बालकृष्ण देउजा सिन्धुपाल्चोकका जनप्रिय एमाले नेता हुन् । २०२४ सालमा तालामाङमा जन्मिएका देउजाले सिन्धुपाल्चोकको राजनीतिमा निर्बाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । २०४२ सालमा पार्टी सम्पर्कमा आएका देउजाले २०४४ सालसम्म भक्तपुरस्थित सानोठिमी भत्तपुरमा क्याम्पस प्रारम्भिक कमिटीमा रहेर काम गरे । २०४६ सालमा पार्टीको संगठित सदस्यता लिएका उनले शिक्षक संगठन, गाविस अध्यक्षहुँदै पार्टीको जिल्ला स्तरीय कमिटीहरुमा रहेर जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन् । केही समय शिक्षण पेसामा सम्बद्ध देउजा अहिले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर दुई ‘ख’को प्रादेशिक क्षेत्रीय कमिटी संयोजक, जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य र अखिल नेपाल किसान महासंघको राष्ट्रिय समिति सदस्यको भूमिका निर्बाह गरिरहेका छन् । राजनीति शास्त्र र ग्रमीण विकासमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गरेका देउजा अहिले प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्र नम्बर दुईको ‘ख’बाट उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका छन् । उनै देउजासँग नेपालीपत्रले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
सिन्धुपाल्चोकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था के–कस्तो छ ?
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला बिगतमा तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र थियो । यी तीन वटै निर्बाचन क्षेत्रमा एमालेको बर्चश्व कायम छ । जिल्लाका कुनै पनि क्षेत्रमा एमालेले कुनै न कुनै पटक निर्वाचन जित्दै आइरहेको छ । अहिले क्षेत्र नं १ मा ने.काका मोहन बहादुर बस्नेत, दुईमा माओवादीका नेता अग्नि सापकोटा र तीनमा ने.क..पा. एमालेका शेरबहादुर तामाङले २०७० को निर्बाचनमा बिजय प्राप्त गरेका थिए ।
एक र दुईमा एमाले झिनो मतले पराजित भएको हो भने तीनमा शानदार बिजयी भएको थियो । अहिले संघीय निर्वाचन क्षेत्र २ वटा मात्र कायम भएको छ । यति बेला ने.क.पा. एमाले बिगतको भन्दा अझै शक्तिशाली भएको छ । माओवादीसँगको कार्यगत एकतापछि त अझ झन् बलियो हुँदैछ ।
यसको परिणाम ने.का. र राप्रपाबीचको कार्यगत एकताका लागि बाध्य जस्तै भएका छन् र कार्यगत एकता निश्चय जस्तै भै सकेको छ । यो एकताले एमालेलाई जति सजिलो हुनु पर्ने हो त्यस्तो अवस्था पनि छैन ।
प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि तपाईंको नाम पनि सिफारिस भएको छ । टिकट पाउने कुरामा चाही कत्तिको आशाबादी हुनुहुन्छ ?
टिकट पाउने कुरामा म पूर्ण रुपमा आशाबादी छु ।
तपाईले नै टिकट पाउनुपर्ने चाहीं किन नि ?
मैले नै पाउनु पर्छ भन्ने मेरो दावी होइन । त्यस भेगका जनताको चाहाना हो । जनताको चाहानालाइ व्यवास्ता गर्न हुँदैन भन्ने मात्र हो । म यस क्षेत्रमा बिगत तीन दशकदेखि जनताको सेवामा सर्मपित हुँदै जनताका सवालहरुमा आधारीत भएर काम गरेकाले मलाई रुचाएका छन् ।
यो कुारा हाम्रा पार्टीका नेताहरुलाइ राम्रो थाहा छ र स्थानीय तहको निर्बाचनमा म पनि मेलम्ची नगरपालिकाको मेयरको प्रत्याशी थिएँ । त्यस वेला नेताहरुले अन्तमा यो पटक सम्भव भएन प्रदेशका लागि तयार हुनुहोस भन्नु भएको थियो । त्यसैले पनि म टिकट पाउने कुरामा पूर्णत विस्वस्थ छु ।
स्थानीय तहको निर्बाचनमा मेलम्ची नगरपालिकामा तपाई पनि मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला तपाईहरुले टिकटका लागि बढी नै हर्कत गर्नु भयो भन्ने आरोप छ नि !
नेकपा एमाले जनवादी केन्द्रियताको शिद्दान्तमा चल्ने पार्टी हो । हामीले पनि त्यति बेला त्यही अभ्यास गरेका थियौं । टिकटको निर्णय नहुँदासम्म निकै जोडबल गर्नमा हामीहरु लाग्यौं । जब टिकटको निर्णय भयो, त्यसपछि चुनावी माहोल बनाउन लाग्यौं र बिगत भन्दा पनि उच्च तहको बाताबरण सिर्जना गर्यौं र शानदार ढंगले जित्यौं । यसले मलाई टिकट दिनुपर्ने कुरामा अझै बल पुगेको छ ।
माओवादी र एमालेबीचको चुनावी तालमेलका कारण टिकट पाउन मुस्किल पर्ने सम्भावना छ भन्ने सुनिन्छ नि !
हो, तालमेलका कारण टिकट यताउता हुनसक्छ । तर तालमेल गर्न बिगतमा प्राप्त गरेको मतको भारलाई आधार बनाउने कुराले एमालेको भागमा नै पर्ने सम्भावना प्रबल छ, मेलम्ची क्षेत्र । माओवादीको भागमा प¥यो भने सोही अनुसार हुन्छ नि के भयो र !
चुनावमा पैसाको चलखेल ठूलै होला जस्तो छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंलाईं चुनाव लड्न गाह्रो हुँदैन त ?
हुन्छ । पैसाको बलमा चुनाव जित्न मलाई मात्र होईन सवैलाइ गाह्रो हुन्छ । अरुले पैसाको समस्याको सामना जसरी गर्छन्, म पनि त्यसै गरी गर्छु । आर्थिक उपार्जनमा नलागेका र जनसेवामा सर्मपितहरुसँग पैसाको अपेक्षा अलि कमै होला जस्तो लाग्छ ।
तपाईले यो निर्बाचनमा टिकट पाउनु भयो र बिजय पनि हुनु भयो भने के गर्नु हुन्छ ?
म कानुनको विद्यार्थी हुँ । प्रदेशले आफ्नो प्रदेशका लागि छुट्टै कानुनको निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसमा मैले आफ्नो तर्फबाट राम्रो योगदान गर्न सक्छु ।
अर्को कुरा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नेपालको राजधानी काठमाडांैसँग जोडिएको जिल्ला हो । यो जिल्ला बिशाल छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि जोडिएको छ । सिन्धुपाल्चोकबाट ल्हासाहुँदै चीनसम्म पशुपंक्षी, तरकारी तथा फलफुल र जडीबुटी निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यहाँबाट सप्लाइ हुने बस्तुहरुको अध्ययन गरेर यसको उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ । यसले सिन्धुपाल्चोकको बास्तबिक आय बृद्धि हुन सक्छ ।
चीनले आफ्नो प्रबिधि प्रयोग गरेर धेरै उत्पादन गर्न सक्छ । तर पनि स्वास्थ्यबद्र्धक चिसो हावापानीमा प्राकृतिक र परम्परागत खाध्य, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु हामी उत्पादन गर्न सक्छौं । जुन बस्तुहरु चिनियाहरुले मन पराउँछन् ।
सिन्धुपाल्चोकको अर्को ठूलो बजार काठमाण्डौ हो । यहाँको कृषिजन्य बस्तुको आवश्यकता पूरा गरेर कृषि प्रबद्र्ध गर्न सक्ने प्रवल सम्भावनाहरु छन । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा धेरै जलबिद्युत् उत्पादन भएको छ । यहाँ खोला नाला प्रशस्त छन तर अझै पनि यसको पर्याप्त उत्पादन हुन सकेको छैन । केही मानिसहरुले झोलामा खोला हालेर बसेका छन् ।
यसलाइ कानुन नै बनाएर पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने सम्भावनाहरु छन् । यस बाट एकातिर नेपालको बिद्युतको आवश्यक्ता पूरा गर्न सहयोग पुग्छ भने अर्कातिर स्थानीय समुदायको आम्दानी बढाउन सकिन्छ । सिन्धुपाल्चोक पर्यटकीय आकर्षक क्षेत्र पनि हो । हेलम्बु, पाँचपोखरी पाटी भञ्ज्याङ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ । यी सम्भावनाहरुलाई प्राथामिकता राखेर काम गर्छु ।